Maleeshiyo beeleed weerar ka fuliyay gobalka Mudug iyo qoys loo dilay Aanooyin qabiil - Allbanaadir
Home Warka Maanta Maleeshiyo beeleed weerar ka fuliyay gobalka Mudug iyo qoys loo dilay Aanooyin...
Maleeshiyo beeleed weerar ka fuliyay gobalka Mudug iyo qoys loo dilay Aanooyin qabiil
Gobalka Mudug wararka naga soo gaaraya gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Saax-Qurun oo hoos taga magaalada Gaalkacayo ayaa waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi lagu dilay dad isku qoys ah kadib weerar lagu soo qaaday.
Weerarka oo ahaa mid qorsheysan waxaa fuliyay maleeshiyaad u abaabulan hab beeleed kuwaaa oo gurigooda ugu soo galay dad isku qoys ah oo isugu jiray 2 Caruur ah iyo Aabahood.
Weerarkan ayaa ka dhacay dhinaca maamul Goboleedka Galmudug waxaana qoyska la dilay aabahood lagu magacaabi jiray Xasan Diiriye Cilmi Waalid ayaa ku geeriyooday weerarka oo loo adeegsaday qori AK-47, isla markaana waxaa uu ku dhaawacmay wiil yar oo 8-sanno jir ah.
Hooyada Carruurta dhashay ayaa goobta ka maqneyd sida ay wararka sheegayaan waxaana markii dambe halka uu falka ka dhacay tegay qaar kamid ah dadka Saax-qurun oo Xarun Caafimaad geeyay Wiilka yar ee dhaawacmay.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in weerarka khasaaraha geystay ee ka dhacay deegaanka Saax-qurun ee hoostega Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug uu la xiriiro aano qabiil oo horey uga dhacday halkaas.
Deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolada Mudug iyo Galgaduud ee Maamulka Galmudug ayaa waxaa horey sidaan oo kale uga dhacay weeraro lagu dilay dad isku qoys ahaa iyo dad kale, waxaana inta badan falalkaas dhacayay ay salka ku haayeen aanooyin qabiil oo deegaanka ka taagan.